ရာသီဥတုဆိုင်ရာ စာချုပ်သစ် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဒေါ်လာ သန်း ၃၀,၀၀၀ လိုအပ်နေ
ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာမှုနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ ကာဗွန်ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်မှုတွေကို ထိန်းချုပ်ရေး ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုတွေကို ပံ့ပိုးသွားဖို့ ဒေါ်လာ သန်း ၃၀,၀၀၀ လိုအပ်မယ့်အကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ ထိပ်တန်းအရာရှိတဦးက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဘင်လာဒင်သတင်း အမေရိကန်တို့ မသိနိုင်
ဆရာမကြီး ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်၏ နှစ် (၅၀) မြောက် ရွှေရတု မွေးနေ့မင်္ဂလာ အခမ်းအနားပွဲတွင် ရခိုင်ရိုးရာအကများဖြင့် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်
ရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားနှင့် လူငယ်များ အစည်းအရုံး (AASYC )
ရဲဘော်၊ ရဲမေများ တင်ဆက်ကပြစဉ်
ဒီဇင်ဘာလ (၆) ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော ဆရာမကြီး ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်၏ နှစ် (၅၀) မြောက် ရွှေရတု မွေးနေ့မင်္ဂလာ အခမ်းအနားပွဲကို ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်၊ မဲဆောက်မြို့ရှိ မဲတော်ဆေးခန်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားနှင့် လူငယ်များ အစည်းအရုံး (ရ.က.လ.စ) မှ ရခိုင်ရိုးရာအကဖြင့် ပထမဆုံး အကြိမ် တင်ဆက်ကပြခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဆရာမကြီး၏ မွေးနေ့ပွဲအခမ်းအနားကို မယ်တော်ဆေးခန်းတွင် နှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်လာခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ် ရွှေရတုအခမ်းအနားတွင် ရခိုင်ရိုးရာအကကို ပထမဆုံးအကြိမ် ဖျော်ဖြေနိုင်ခဲ့သဖြင့် ၀မ်းသာပီတိဖြစ်ရကြောင်း (ရ.က.လ.စ) အထွေအထွေအတွင်းရေးမှူး ကိုအောင်မင်းဦးက Arakan Review သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ လိုချင်သည့် ပုံစံလုပ်နိုင်ဟု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ယုံထားလား
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေသည် မကြာသေးခင်က ပြုလုပ်သော အထူးစီမံကိန်းများ အကောင်အထည် ဖော်ရေးအဖွဲ့ ညှိနှိုင်းအစည်း အဝေး (လေးလပတ် အစည်းအဝေး) တွင် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် နိုင်ငံရေး
အထက်အာဏာပိုင်များကို ငွေပေး၍ လောင်းကစားလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေ
မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့က လောင်းကစားဒိုင်များထံမှ ငွေတောင်း၍ တိုင်းအဆင့်အာဏာပိုင်များ ပေးလိုက်သည့်အတွက် မြို့ပေါ်ရှိ လောင်းကစားဒိုင်ချုပ်များမှာ ယခင်အတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေလျှက်ရှိသည်။
မော်လမြိုင်ဈေးဖွင့်ပွဲတွင် လုံခြုံရေး တင်းကျပ်စွာ ချထား
Mon 07 Dec 2009, မိကျလွန်းထော၊ မိယဉ်မွန်
ယမန်နေ့ ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် မော်လမြိုင်အမှတ် (၁) နှစ်ထပ်ဈေး (ခေါ်) အောက်ဈေးသစ်ကြီး ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် လုံခြုံရေးတင်းကျပ်စွာ....အပြည့်အစုံသို့..
ကားမိုင်းထိ၍ ရွာသားတဦး သေဆုံး နှစ်ဦးဒဏ်ရာရ
December 7, 2009 – 5:08 am |
နအဖတပ်များသည် ယခုလဆန်းပိုင်းအတွင်း တောင်ငူဒေသတွင် တပ်ရိက္ခာများ သယ်ယူပို့ဆောင်ရန်အတွက် ရွာသားကားများကို ချောဆွဲခေါ်ယူရာ ကားတစီးမှာ မိုင်းထိ၍ ရွာသားတဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး နှစ်ဦး ဒဏ်ရာရှိခဲ့သည်ဟု ထိုဒေသမှ လာသည့်သတင်းအရ သိရသည်။
အာဏာပိုင်များက ရိက္ခာများကို ဖြတ်စားသဖြင့် ဘူးသီးတောင်ထောင်ထဲရှိ ထောင်သားများ အာဟာရ မပြည့်ဝ ဖြစ်နေ
ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင် ထောင်ထဲရှိ ထောင်သားများအတွက် ရိက္ခာကို ထောင်အာဏာပိုင်များက ဖြတ်စားပြီး အပြည့်အ၀ မကျွေးသဖြင့် ထောင်သားများမှာ အဟာရ ချို့တဲ့မူနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြရသည်ဟု ထောင်ထဲက လွှတ်မြှောက်လာသူ တဦးက ပြောသည်။ အပြည့်အစုံသို့
အသစ် ဖွဲ့စည်းလိုက်သော ရခိုင်အမျိုးသားကောင်စီမှ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့တွင် မူဝါဒရေးရာ ရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်
မောင်အေး(နိရဉ္စရာ): ၂၀၀၉ ခုနှစ် စက်တင်္ဘာလ အတွင်းက မလေးရှားနိုင်ငံတွင် အသစ်ပြန်လည် ဖွဲ့စည်း လိုက်သော ရခိုင်ပြည်အမျိုးသားကောင်စီ၏ မူဝါဒရေးရာ ရှင်းလင်းပွဲ တရပ်ကို ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ ကော့စ်ဘာဇားမြို့ (ဖလောင်းချိတ်) တွင် ယမန်နေ့က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အပြည့်အစုံသို့
စီးပွားပျက်ကပ် ဆေးမြီးတိုနဲ့ ဆေးမြီးရှည်
၂၀၀၉ နှစ်ဆန်း အမေရိကန်မှာ သမတအသစ်တယောက်တက်လာပြီးနောက် အမေရိကန်က စပြီး တကမ္ဘာလုံး ကူးစက်နေတဲ့ စီးပွားပျက်ကပ်ကြီးကို ဖြေရှင်းဖို့၊ ကယ်တင်ဖို့ ခေါင်းဆောင်တွေ၊ ပညာရှိကြီးတွေက ဆေးမြီးတိုတွေ၊ ဆေးမြီးရှည်တွေနဲ့ စတင်ကုစားကြတော့တာပါပဲ။
ပထမဦးဆုံးကတော့ အရှုံးပြနေတဲ့ ပြိုလဲတော့မလိုဖြစ်နေတဲ့ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ အာမခံလုပ်ငန်း၊ ငွေကြေး အစုစပ် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေကို ပြီးတော့ အမေရိကန်ရဲ့ မော်တော်ကားလုပ်ငန်းကြီးတွေကို အမေရိကန်ုအစိုးရက ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ပြီး ကယ်တင်တာက အဆင့်တဆင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွှေမန်းသား ဝိုင်ဖိုင်အင်တာနက်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရ
အောင်ကျော်မိုး / ၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၉
“ခု Red Link ကုမ္ပဏီဟာ နေရာတချို့မှာ ဝိုင်ဖိုင်စနစ် တပ်ဆင်ထားမယ်။ နောက် အဲဒီ ဝိုင်ဖိုင်ရတဲ့ နေရာတွေမှာ အင်တာနက် အသုံးပြုလို့ရနိုင်တဲ့ ကြိုတင်ငွေပေး Prepaid ကတ်တွေ ရောင်းနေပြီ။ အဲဒီ ကတ်တွေဝယ်ပြီး ကိုယ်ပိုင် လက်ဖ်တော့တွေနဲ့ အင်တာနက် သုံးနိုင်တယ်။ ဒါဟာ မြန်မာပြည်မှာ .....”အပြည့်အစုံသို့
ပေါက်ပေါက် / ၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၉ “အခုဆိုင်ကယ်ဈေး ပြန်ကျ
နေတယ်၊ အဝင်များလာတဲ့ နောက်ပိုင်း....”အပြည့်အစုံသို့
သေဆုံးခဲ့သူ ကျောင်းသူလေး၏ မိသားစုအား အထူးကုဆေးခန်းက တောင်းပန်ပြီ
မျိုးချစ်သူ / ၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၉ “အခုလို လာရောက်တောင်းပန် တာကို ကျမတို့ကျေနပ်ပါတယ်။ တနိုင်ငံလုံးက...”အပြည့်အစုံသို့
ရဲရင့် / ၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၉ “ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေက ပြေလည်အောင်မဖြေရှင်းပေးဘူး။ အဓိက ထိုင်းလ၀က”အပြည့်အစုံသို့
ကိုညီညီအောင် အင်းစိန်ထောင်အတွင်း အစာငတ်ခံဆန္ဒပြ
NEJ / ၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၉ “အန်တီတို့ ဒီနေ့ နေ့လယ်
(၁၂) နာရီမှာ သွားတွေ့တဲ့အခါမှာ တော်တော်လေး...”အပြည့်အစုံသို့
ကိုညီညီအောင် ထောင်ထဲတွင် အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြ
အကျဉ်းသားများကို ထောင်အာဏာပိုင်များက ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုကြောင့်ဟုဆိုကာ မြန်မာနိုင်ငံဖွား အမေရိကန်နိုင်ငံသား ကိုညီညီအောင် (ခေါ်) ကိုကျော်ဇောလွင်သည် အင်းစိန်ထောင်တွင်း၌ ...
CDMA ဖုန်းအသစ်ကို လူအများ စိတ်ဝင်စား
ကဗျာဆရာ ခန့်မင်းထက် ပြန်လွတ်လာ
ရန်ကုန်တိုင်း အထူးရဲသတင်းတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးပြီး ရက် ၄၀ နီးပါး ပျောက်ဆုံးနေသော အလင်္ကာဝတ်ရည်ဂျာနယ် ဒီဇိုင်းဆရာနှင့် ကဗျာဆရာ ခန့်မင်းထက်...
ကျနော်က ရေကျော်သားမဟုတ်….။ သို့သော် …. ရေကျော်တွင် ဧည့်သည်သွား၊ ဧည့်သည်လာနှင့် ၄ နှစ်ခန့် နေခဲ့ဖူး၏။ ၁၉၈၄...
Anemia (အနီးမီးယား) ခေါ် ဒုက္ခသည် ရောဂါတမျိုး
ဒုက္ခသည်ကို (ရဖြူဂျီ) လို့ပြောရင် ပိုနားလည်ကြတယ်။ အိန္ဒိယကို ရောက်နေတဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေဟာ ဗမာမဟုတ်သူက အများကြီး များလို့...
မုန်တိုင်းကြောင့် မိဘမဲ့သူတွေအတွက် ရန်ပုံငွေပွဲ
အိန္ဒိယရောက် မြန်မာအမျိုးသမီးဒုက္ခသည်တွေ နှောက်ယှက်တာ ပ္ဘိုပီး ကြုံတွေ့နေရ
ဒေၞအောင်ဆန်းစုကြည်ပေးစာ ထားဝယ် NLD ထောက်ခံ
မုန်တိုင်းသင့်ဒေသတွေကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကွင်းဆင်း